Nox Security - ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ သန့်ရှင်းသောဗိုင်းရပ်စ်၊ Booster APK အား Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Nox လုံခြုံရေး - Antivirus ကို, သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်, Booster
Nox လုံခြုံရေး - Antivirus ကို, သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်, Booster APK ကို
Nox လုံခြုံရေးနေ့စဉ်တစ်ဦးလူကြိုက်များလုံခြုံရေး app တစ်ခုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်လာနေပါသည်!
Nox လုံခြုံရေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သငျသညျလုံခြုံသင်၏ဖုန်း & privacy ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်ဖုန်းကို performance ကိုပိုကောင်းအောင် app တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင် antivirus ကို antivirus ကိုအတူပလီကေးရှင်း, cache ကိုသန့်စင်, အကြောင်းကြားစာ blocker, AppLocker, ဖိုင်စာဝှက်စနစ် ... Nox လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှုရှိရမည်!
^ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ ^
💀အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင် : ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် malware ကနေသင့်မိုဘိုင်းသိမ်းဆည်းထားပါ
📲မက်ဆေ့ခ်ျကိုလုံခြုံရေး: သင်၏အကြောင်းကြားစာ preview ကို peeping ထံမှအခြားသူများကိုကာကွယ်ပါ
🔕သတိပေးချက် blocker : Block ကိုနှောင့်အယှက်အသုံးမကျသတိပေးချက်
🔐Applocker : apps များနှင့်ကိုယ်ရံတော် privacy ကိုကာကွယ်ပါ
????wifi လုံခြုံရေး: မဆိုကွန်ယက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုကနေသင့်ရဲ့ device ကိုကာကွယ်ပါ
📞အဘယ်သူမျှမနှောင့်ယှက်: ထိရောက်စွာ Block ကို spam များကိုများနှင့်မလိုချင်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
🔋 ဘက်ထရီချွေတာ: တစ်ဦးတည်းသာအသာပုတ်နှင့်အတူအာဏာဖျန် apps များရပ်တန့်
🚀junk သန့်စင် : တက် Free နှင့်ပိုပြီးသိုလှောင်ရန်နေရာရ
💀ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware ကနေသင့်မိုဘိုင်းသိမ်းဆည်းထားပါ
Nox လုံခြုံရေးသင့်မိုဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေးသည်နှင့် malware ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည် - ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, spyware, Rootkits များနဲ့, ဟက်ကာများနှင့်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနှင့်ပိုပြီးအပါအဝငျ။ ဒါဟာသင်သန့်ရှင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကူညီနိုင်လည်းသင့်ရဲ့ privacy ကိုဖိုင်များကာကွယ်နည်းများနှင့်ပိုမိုဘေးကင်းစေနိုင်သည်။
Nox လုံခြုံရေးအားကောင်းတဲ့နှင့်အကျိုးရှိစွာအကြောင်းကြားစာ blocker နှင့်မန်နေဂျာပေးပါသည်။ သငျသညျနှောင့်အယှက်ရှိတဲ့ Junk အသိပေးချက်များကိုတွန်းကြောင်း apps များနာမည်ပျက်စာရင်း blacklist လုပ်ခြင်းအားဖြင့် jamming နှင့်သင့်ဖုန်းကိုနှေးကွေးရှိတဲ့ junk အကြောင်းကြားစာဖယ်ရှားပစ်ရယခုအကြောင်းကြားစာ blocker ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာမှသင်၏ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်အကြောင်းကြားစာ bar ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေမည်။
သင်သည်သင်၏ privacy ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုတခါတရံအခြားသူများ peeing စိတ်ပူဖြစ်ပါသလား Nox လုံခြုံရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလုံခြုံရေးနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သင်ကပွင့်လင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုလုံခြုံရေး function ကိုတခါသင့်ရဲ့အကြောင်းကြားစာကို preview ကို peeping ထံမှအခြားသူများကိုတားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရုံ Nox လုံခြုံရေး, စင်ကြယ်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို install နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်အကြောင်းကြားစာ preview ကိုပယ်နေဖို့!
🚀junk Cleaner & မှတ်ဉာဏ် Booster
junk သန့်စင်မှုစနစ် cache ကိုအပါအဝင် junk ရှင်းလင်းနိုင်သည်, cache ကို, အချည်းနှီး APK များ, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, အေဒီ cache ကို apps ။ Nox လုံခြုံရေးကိုလည်းမှတ်ဉာဏ်တက်လွတ်မြောက်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, မှတ်ဉာဏ်အာနိသင်တိုးမြှင့်ရှိပါတယ်။
သငျသညျပြီးသား telemarketing, spam များကိုနှင့် robocalls နဲ့တူနှောင့်အယှက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုငြီးငွေ့လျှင် Nox လုံခြုံရေးသင်တို့၏ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်! သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုစာရင်းကိုဖို့မလိုချင်တဲ့နံပါတ်များကိုထပ်ထည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်ထဲမှာဖုန်းခေါ်မရပိတ်ဆို့ဖို့ပါ!
Nox လုံခြုံရေးအားလုံးဟာ android app များကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ပုံစံသော့ခတ်နဲ့နံပါတ်သော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဖုန်းကို privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိက apps များနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖိုင်တွေသော့ခတ်နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိရာမှကွာစောင့်ရှောက်ဖို့ကသုံးနိုင်သည်။
⏰Anti-ခိုးယူ features တွေအဘို့အ real-time ကာကွယ်မှု
Nox လုံခြုံရေးထိုကဲ့သို့သော device ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, malware များအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်အခြေခံ feature များအရပါဘူး, ဒါပေမယ့် Real-time device ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်မသာ။ real-time ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို malware, ဗိုင်းရပ်စ်တွေ adware, spyware, spyware, phishing, Rootkits များနဲ့နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် Trojan များဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်။
???? Network မှထောက်လှမ်းခြင်း & လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု
WIFI လုံခြုံရေးနှင့်အတူ, Nox လုံခြုံရေးမဆိုကွန်ယက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုကနေသင့်ရဲ့ device ကိုလုံးဝလုံခြုံကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ WIFI လုံခြုံရေးသင်သည်ချိတ်ဆက်နေသော Wi-Fi လုံခြုံသို့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဒါဟာအစသင်အင်တာနက် surfing နေသောအချိန်ကာလအတွင်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။
🔋ဘက်ထရီချွေတာနှင့်အတူအာဏာဖျန် apps များရပ်တန့်
ဘက်ထရီချွေတာမှုနှင့်အတူ Nox လုံခြုံရေးသင်သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်နောက်ခံမှာ run ထားတဲ့မလှုပ်မရှား applications များပိတ်လိုက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအာဏာကိုစားသုံး apps များရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီ status ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
【 NOX လုံခြုံမှုမှတ်ချက်ပြု】
📌 Optimized AppLocker အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအား
📌ဘာဂ် fixed နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
Nox လုံခြုံရေး - Antivirus ကို, သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်, Booster
12.08 ကို MB